Kenya oo Xaqiijisay in askar looga dilay Xeryaha Barkaca ee ku yaala Xuduuda – SBC
Kenya oo Xaqiijisay in askar looga dilay Xeryaha Barkaca ee ku yaala Xuduuda
Saraakiil ka tirsan Ciidamada amaanka ee wadanka Kenya ayaa xaqiijiyay in sadex sakal oo ka mid ah saraakiisha kenya ee Jooga Deegaanada xuduud u dhow la dilay ka dib markii weerar koox hubeysan ay weerar ku qaaday Xero lagu magacaabo Gerille oo ku taala Degmada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya.
Weerarka lagu dilay Sadexda Sarakaal ee Kenyanka ah waxaa sidoo kale uu dhaawac ka soo gaaray labo kale sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Ciidamada amaanka oo diiday in Magaciisa Saxaafada laga sheego.
Weerarka ugu danbeeyay ee lagu qaaday ciidamada amaanka ee wadanka Kenya waxaa sidoo kale ku dhaawacmay Laba kale oo askarta ka tirsan kuwaasi oo ay waxyeel ka soo gaartay weerar lagu qaaday Ciidamada amaanka.
Afhayeenka Booliiska Dalka Kenya Eric Kiraithe waxaa uu xaqiijiyay weerarka lagu qaaday ciidamada waxaana uu sheegay inuusan weli hayan warbixin dhameystiran oo ku aadan weerarka lagu qaaday ciidamadooda.
Ma jirto cid weli sheegatay masuuliyada weerarkankan ugu danbeeyay ee Maanta lagu qaaday ciidamada amaaanka ee dalka Kenya laakiin dowlada Kenya ayaa warkan waxay ku eedeyneysaa inay ka danbeeyeen Xarakada alshabaab oo dagaalo ay kala dhaxeeyaan ciidamda Kenya.
Dhacdooyinkan ka dhacay Xuduuda Kenya ee lagu begsanayo ciidamada amaanka ayaa bilowday wixii ka danbeeyay bishii October ee sannadkii tagay markii ciidamada amaanka ee Kenya ay weerar ku soqaadeen deegaanada Jubooyinka oo ay gacanta ku hayeen xarakada alshabaab.